Qorshaha loo xiray Terminal Movcon oo lagu baraarugay | KEYDMEDIA ONLINE
Qorshaha loo xiray Terminal Movcon oo lagu baraarugay
In AMISOM, iyo wakiillo shisheeye, hor istaagaan in booliska Soomaaliya ka howl-galo qeyb ka mid ah garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, waxa ay guud ahaan ciidanka qalabka sida ee dalka ku tahay niyadjab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah, billowgii todobaadkaan, DF iyo Wakiillo ka socda Besha Caalamka ee deggan xerada Xalane ayaa ka wada hadlay qorshaha dib loogu howl-galinayao Terminal-ka Movcon, ee garoonka Aadan Cadde, kaas oo albaada la isugu diftay 24ka Diseembar 2021.
Wasiirka Amniga Cabdullahi Maxamed Nuur iyo masuuliyiin kale oo ka socday Dowladda Federaalka ayaa kulan qarsoodi ah, horraantii isbuucaan, UNSOM iyo AMISOM , kula yeeshay Xalane, kaas oo lagu gorfeeyay sidii lagu hirgalin lahaa hannan ciidan oo isku dhaf ah oo ka howlgala Movcon.
Sida aan hore u sheegnay, mid ka mid ah qodobbada ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, u cuskatay xiritaanka qeybtaan ay adeegasan jireen AMISOM, UN-ka iyo Safaaradaha ajnabiga, ee caasimadda degan ayaa ahaa in AMISOM, hor istaagtay in Booliska Soomaaliya ka howl-galo qeybta hubina Terminal-ka.
Xoguhu waxa ay muujinayaan, in hadda wakiillada shisheeye oggolaadeen in Ciidamo Soomaali ah, gaar ahaan kuwo hoos taga qebta guud ee Booliska Gobolka Banaadir, la geeyo qeybta hubinta, si DF uga warqabto waxa ka soo degaya iyo waxa ka baxaya qeybtaan.
Sidoo kale, Dowladda Soomaaliya, waxa ay si cad ugu sheegtay UN-ka, in ay waajib tahay in ciidaka Soomaaliya, ku sii tababarto shaqada qeybtaan, maadaama ay iyagu la wareegi doonaan maamulka Movcon, marka uu soo gabagaboobo Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM.
Wasiirka Arrimaha Dibadda, Cabdi Siciid, oo muddo dheer soo ahaa la taliyaha amniga Farmaajo, ayaa lahaa amarka lagu xiray Terminal-kan, taas oo xoojisay warar soo baxay oo sheegaya in Xaafiiska Farmaajo uu tallaabadaas ku hor istaagayay lacag malaayiin dollar ah oo ka imaaneysa mid ka mid waddamada carbeed una socota mucaaradka, taas oo la doonayo in loo adeegsado doorashada.
Wasiirka Amniga Gudaha, Cabdullahi Maxamed Nuur, qorshaha uu oo gacan saar la leh xubno ka tirsan Midowga Musharixiinta ku doonayo in lagu furo qeybtaan, ayaa sidoo kale sii joojisay shakiga ku gadaaman lacagta la sheegay in ay ka imaaneyso dalalka carbeed oo xilliyada doorashada lacag xooggan siiya musharixiinta u baratamaya xilka Madaxweynaha Soomaalida.
In AMISOM, iyo wakiillo shisheeye, hor istaagaan in booliska Soomaaliya ka howl-galo qeyb ka mid ah garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, waxa ay guud ahaan ciidanka qalabka sida ee dalka ku tahay niyadjab, waana tallaabo ay dad badan soo dhawynayaan in askar Soomaaliyeed ka hor tagaan waxyaabo aysan dowladda la socon iyo kontorbaan gudaha loo galiyo Muqdisho.
Xilligii uu soo baxay amarka lagu xirtay qeybtaan uu shesheeyuhu adeegsado, waxaa aloosnaa khilaaf u dhaxeeyay Dowladda Federaalka iyo hoggaanka AMISOM, kaas oo xoogeystay kadib raacdeyntii ku xigeenka ergayga Midowga Africa ee Soomaaliya, Simon Mulongo, hayeeshee, labada dhinac ayaa dhawaan tallaabo hormar leh u qaaday qorshaha kala guurka.
Sida ay ku doodayaan, shaqsiyaadka u dhuunduleela arrimaha sirdoonka, amniga iyo siyaasadda, waa waajib in wixii hadda danbeeya ay ciidamada Soomaaliya lahaadaan muhiimadda koobaad ee howlgalka qorshaha amniga dalka, isla-markaana loo baahan yahay in xilliga doorashada aysan marti ka noqon kaalintooda amniga.